Kuze kube manje, panel plastic for kuvulandi - kungcono inguqulo ethandwayo kakhulu yokuqedela yakhe. Okubalulekile okunjalo uyakwazi ikhava qualitatively imifantu ahlukahlukene nezinye ukukhubazeka ebusweni. Ngaphezu kwalokho, PVC ezisetshenziswa emasimini ukukhiqiza ukudla panel, ine kakhulu umsindo ukushisa kanye ukwahlukanisa, bese ukhetha imodeli kwesokudla kanye nemibala unga nganoma iyiphi esitolo sezinto zokwakha. Kulesi sihloko uzofunda kungani emphemeni panel eyenziwe ngepulasitiki kukhona indawo enhle kakhulu yokuqedela ezibonakalayo.
panel Plastic for kuvulandi - sici futhi ngokungafani ukhuni
Balcony panel zenziwa PVC, okuyinto izinto ezahlukene ukwenza umsebenzi kokuphothula. Ngenxa izakhiwo zayo eziyingqayizivele, imikhiqizo PVC ungaba lowehlukile ngisho ukwazi ukulingisa ebusweni kwesihlahla (endleleni, lokhu Umbala kuthandwa kakhulu). Ngaphandle kwakho konke lokhu, PVC izikhathi eziningana ezishibhile ukhuni nensimbi kumakhophi, kanye panel ke plastic for emphemeni ayatholakala cishe yonke imindeni.
panel Plastic ku Loggia
Njengoba yaziwa, Loggia - kuba egumbini lokuqala lapho ukukhanda ifulethi iqala. Kuyinto imfihlo ukuthi ukususwa / ukufakwa amafasitela kakhulu isikhathi-ukudliwa kanye nokuzivocavoca ebizayo. Wonke umnikazi izibophezele emsebenzini wakhe futhi umsebenzi izinga izisebenzi yibo. Akufanele sibakhohlwe ukuthi emva kokufakwa amawindi udinga amakhono puttying kanye abaluphahleka ebusweni. Futhi uma ungafuni bachithe amandla abo, wena-ke kungenziwa uchwepheshe (Yiqiniso, imali). Ngenhlanhla, lokhu kwenzeka kuphela amafasitela lokhuni. Uma uhlela ukufaka izakhi ezimbili nje - amawindi plastic kanye panel, inkathazo esingeziwe abaluphahleka awudingi. Ngokungafani izinto ezifanayo, panel plastic for kuvulandi ukuqeda kahle engavamile futhi ungakwazi ukukhonza njengomdala esikhundleni esihle kakhulu Tile nezinye izakhi eziningi yokuqedela. Bafaka mayelana usuku olulodwa (kuye ngokuthi indawo loggias).
Ake agcizelele izinzuzo main of ngombala plastic:
PVC linamandla kakhulu umswakama, ngakhoke ingasetshenziswa hhayi kuphela on emphemeni, kodwa futhi in the yokugezela noma ekhishini. Ngenxa design yayo, i-PVC kungenziwa kanyekanye efakwe ophahleni futhi izindonga, kuyilapho ngokuvumelanayo fitting yokuphila ezindaweni eziphakathi nezwe. Nge plastic wena asesabi isimo, uma ugcwalisa omakhelwane ngenhla.
ukunakekelwa Easy. PVC imikhiqizo kungukuthi lifuna azinakekele. Ukuze panel sisihle, udinga kuphela ukuze asule ubuso bayo ngendwangu emanzi evamile. Ngokungafani ukhuni, mikhiqizo angadingi Umdwebo yonyaka kanye varnishing. Futhi ngokungafani nozakwabo steel, lezi panel plastic neze nokugqwala kwakhiwa. Uma uhleleni ezicwebezelisiwe balcony aluminium ngombala epulasitiki eminyakeni 10-15 esilandelayo, ungenawo ngisho kudingeka ukulungisa panel.
Fire ukuphepha. Kufanele kuqashelwe ukuthi into burns ezingeni lokushisa 400 ° C, okuyinto kunomphumela omuhle ukuphepha jikelele izakhiwo.
Njengoba ubona, beya kuvulandi elicwebezelayo nge sekugcineni plastic iqinisekisa ekuphileni okude umkhiqizo.